Hagaha kama dambaysta ah ee ku baahidda Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Hagaha kama dambaysta ah ee ku baahidda Yurub
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 01/04/2021)
Adduunyada oo dhan, tiifintu waxay leedahay raadayn iyo dhaqangelin aad u kala duwan, tusaale ahaan: Talobixinta Koonfur Afrika ayaa loo baahan yahay, sida ku jirta USA. Waxaa lagaa filayaa inaad ka baxdid caarada u dhaxaysa 15 iyo 25% Ameerika, iyo hadaadanad si fiican u eryan karin waardiyaha caarada ah. Laakiin waa sidee Yurub? Biilal badan oo Yurub ku yaal ayaa noqon doona talo bixinno dhan, si kastaba ha ahaatee, Tani way ku kala duwan tahay waddan ilaa waddan. Ogaanshaha dhaqamada khafiifinta ah ee dalkaaga aad ku sugan tahay waxay ka hor tagi doontaa jahwareerka iyo dareenka xun. Marka aqriso tusmada ugu dambeysa ee Europe!
Tareen Gaadiidka Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Bogagga Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Adduunyada.
Tilmaanta ugu dambeysa ee Talo Siinta Yurub ee Adeegga
Talosiinta Yurub guud ahaan way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay nooca adeega aad helayso. Tusaale ahaan, waxaa lagaa filayaa inaad ku tusiso makhaayad maqaayad shan xiddig leh oo saldhig ka ah server-ka gadaal miiska. Bartenders ma fileyn doono inay wax uun gaaraan kiisaska qaar, halka darawallada tagaasida ay ku dhici lahaayeen. Adeegsiga ikhtiyaarkaaga, iyo deeqsinimada had iyo jeer waa habka ugu wanaagsan ee loo maro marka la go’aaminayo tilmaamaha saxda ah. Sidoo kale, Meelaha badankood waxay u baahan yihiin inaad lacag caddaan ah ku soo baxdo, sidaa darteed iska hubi inaad marwalbo dhowr Euro kuu soo qaadatid markasta.
Talo galinta Makhaayadaha
Xaalad kasta oo cuntada ama cabitaannada la keeno miiska caadiyan waxay u baahan tahay talo. Qaddarku wuxuu kuxiran yahay nooca cuntada aad jeceshahay. Qawaaniinta caadiga ah ee Yurub dhexdeeda waa inaad kaga tagto hal ama labo biilasha lacagta dusha sare ah markay tahay cabitaanno laakiin aan cuntada la dalban. Cunnooyinka buuxa ee jawi fadhiisintu way kala duwan yihiin. Kiiskan, a few euros per person is usually sufficient. Makhaayadaha shanta xidig leh ee kuyaala qaarada Yurub badanaa waxay ku daraan caarada biilkooda. Hubso inaad fiiriso tan sababtoo ah looma baahna inaad ka tagto tilmaamo dheeri ah ilaa aad runtii ku raaxeyso adeeggaaga. Adeeg heer sare ah ayaa mararka qaar u baahan talo dheeri ah, sidaa daraadeed kiisaskaas, waxaa laga yaabaa inaad sida ugu badan u socoto 15%.
Badi baararka ama baararka ku yaal qaaradda oo dhan kama filayaan talooyin gabi ahaanba. Bartenders waxaa la siiyaa mushahar, iyo halka xoogaa qadaadiicda ah oo ku jira gunta caarada ay u badan tahay in la mahad celiyo, muhiim maahan. hadaad tilmaamo, mar kale xasuuso inaad isticmaasho lacag caddaan ah, midkood qoraalada ama qadaadiicda. Lacala hadii aad dhamaadka dabacsantahay halkaan waxaa ku taxan liiska 5 Baararka Best Iyada oo Music Live In Europe.
Brussels ilaa tigidhada Amsterdam
Tikidhada London ilaa Amsterdam
Tikidhada Berlin ilaa Amsterdam
Paris ilaa tigidhada Amsterdam
Stylists Iyo Spa's
Dad badani waxay rabaan inay yeeshaan timo cusub oo cusub, ama duugis deggan inta lagu jiro fasax. Nasiib wanaag waxaad ka heli doontaa isboortiga iyo stylists Yurub oo dhan, inta badan magaalo kasta. Talo bixin, labada xaaladba, badanaa waa boqolkiiba toban. Haddii aad tahay qof aad ugu qanacsan adeegga aad heshay, waxaad u bixi kartaa sida ugu sareysa 15%.
Hoteellada waa su'aal soo noqnoqota markay timaado su'aasha ku saabsan Yurub. Sida caadiga ah suulka, mid had iyo jeer waa inuu raacaa hagida 'One Euro Guide'. Tani waxay aasaas ahaan sheegaysaa inaad uga tagto hal Euro hal talo bixin adeegkiiba. Haddii gambaleel ama xamaarad qaado boorsooyinkaaga, markaa hal Euro hal boorso ayaa ku filan. Nadiifinta guriga waa inay heshaa Euro maalintii. Kusoo celinta lataliyahaaga ayaa adiga kuu gaar ah, laakiin waxay kuxirantahay heerka adeega aad heshay. Haddii ay dhaaftay wax ka badan iyo wixii ka dambeeyaba waxa laga yaabaa in joogistaadu noqoto mid xusuus iyo raynrayn leh, markaa caarad shan ilaa toban euro ah ama xitaa dhaafsiisan ayaa habboon.
Maxaa Loogu Tala Galayaa Tagaasida Iyo Gaadiidka
Taksi iyo Ubers waa qayb gudaha ah oo ku saabsan hareeraha Yurub. Markaad dooraneyso waxa aad caleema saari lahayd, waxaa ugu wanaagsan in maskaxda lagu hayo sida lacagta darawalka loo siiyo. Guud ahaan, in kastoo, labo Euro oo loogu talagay tagsi gaagaaban ama Uber fuulitaan ayaa ku habboon. Barnaamijyada sida Uber ayaa kuu oggolaanaya inaad si toos ah u siiso darawalka elektaroonig ahaan, halka tagaasida metelenku u baahan doonaan lacag caddaan ah. Xaraashka Yurub inta safarka ahi wuxuu lamid yahay sida tuubooyinka baararka ama makhaayadaha. Maskaxda ku hay in had iyo jeer aan loo baahnayn, laakiin inta badan la qadariyo. Kaadhista tigidhada tareenkaaga waayo, safarka Yurub waa mid fudud oo fudud websaydhka Tigidhada Tareenka ee ugu Jaban Dunida.
Tilmaanta kama dambaysta ah ee Talo Siinta Yurub Yurub
Wadamada badankood waxay raacaan isla tilmaamaha guud marka ay timaado qaarada Yurub. Dabcan, mid waa in had iyo jeer baar meesha loogu talagalay Kahor safarka si aad u hubiso inaad si buuxda u cusbooneysiisay. safarka tareenka had iyo jeer waxay kugu qaadi karaan wadamo dhowr ah isku waqti, sidaa darteed hubinta sida saxda ah ee loo sameeyo midkasta marwalba way caawinaysaa. Wadamada qaarkood waxay ka istaagaan dhiggooda dhigis ahaan xagga shuruucda, si kastaba ha ahaatee.
Iceland iyo Scandinavia
Haddii ay tahay dib u dhac ku yimid asalkoodii Viking ama siyaasad fudud, Wadamadaani waxay doorbidaan inaadan sinaba geysan. Inta badan maqaayadaha iyo adeegyadu waxay lahaan doonaan caarada biilka. Weli waa ku habboon tahay in lagu soo koobo biilka illaa Euro ugu dhow halkii laga siin lahaa lacag bixin ama kaarka amaahda.
Giriigga iyo Qubrus
Qofka Griiggu wax kasta wuu yara sameeyaa, iyo tiifintu waa ka reeban tahay. Biilasha waaweyni waxay u baahan yahiin talooyin yar oo biilasha yaryar waxay u baahan yahiin talooyin waaweyn.
Ka tag ugu yaraan a 5% tip, lacag kaash ah oo loogu talagalay macaamiisha, xitaa haddii biilku ku jiro lacag la'aan. Lacagta caddaanka ahi had iyo jeer waa boqor inta badan waddamada Yurub, iyo Austria waxba kama duwana.
Maxay Talo Siinayaan Ireland iyo Scotland
Ku caan baxay saaxiibtinimadooda, labadan quruumo waxay boorsooyinkaaga farxad ku qaadan doonaan. Tilmaamida boorsooyinka shandadaha maahan muhiim, oo badiyaa lama filayo. In la ixtiraamo oo la yiraahdo mahadsanid si xushmad leh waa, si kastaba ha ahaatee, filayay. Haddaad jeceshahay inaad mustaqbalka isla adeeggaas ka hesho adeegahaaga, iska hubi inaad si qumman u garatid.
Maxaa Talo Siinaya Yurub – Britain
Dad badan oo reer Ingriis ah ayaa isku dayay inay u sharxaan dalxiisayaasha in taayiridda guryeynta runtii aan loo baahnayn. Markay timaaddo Europe, Tani waa mid ka mid ah xeerarka adag. Ha uga tagin caarada qolkaaga hoteelka, waxaa loo badiyaa in lagu wareejiyaa miiska hore sidii lumay lacag. Bartenders sidoo kale ma rajeynayaan talooyin, iyo tirtirintooda waa la isdhaafsan karaa. Si kasta ha noqotee, Noqo mid saaxiibtinimo ah oo qiraya ganacsadahaaga. Dhowr qadaadiid ah ku shub weelka caarada haddii ay jirto. Haddii aadan, halkii aad caarada ka saartay isla'egta.
Wareegaya Dhamaan Macluumaadka Ku Saabsan Qaarada Yurub
Talada ugu fiican ee Yurub laga helo waa inaad sameyso shaqada gurigaaga. Akhri waxkastoo ku saabsan dalka, ama wadamada aad qorsheynayso inaad booqato. Xusuusnow taas Safarada tareenka badanaa waxay kugu qaadaan dhowr wadan si aad u awoodo inaad ku joogsato at. Had iyo jeer soo qaado lacag, labada qadaadiic, iyo xoogaa qoraal ah oo lagu soo shubo lacag caddaan ah. Haddii aadan hubin siyaasadaha, ku dheji sharciga toban boqolkiiba ee maqaayadaha, iyo midka kaliya ee Euro ah ee loogu talagalay wax kasta oo kale.
Xusuusnow, Waxaan jecel nahay inaan ku bari karno Safarka, marka marka waqtigu sax yahay oo aad go aansato inaad safarto, Xusuusnow in Safarka Tareenka uu yahay midkeenna gaarka ah oo aan dooranno Save A tareenka, waxaan jeclaan laheyn inaan kaa caawino inaad safarkaaga ku raaxeyso!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Hagaha kama dambaysta ah ee ku baahidda Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-tipping-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, waxaadna u bedeli kartaa de de fr ama tr iyo luqado badan oo aad doorato.
#makhaayad europetravel Cuntada TippingEurope tareen safarka traveltips Fasaxyada
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Technology Oo Travel